Lamb (2021) – MM Subtitles
Video Sources 3358 Views Report Error
အိုက်စ်လန်းရဲ့ ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဒေသတစ်ခုမှာ အင်ဂဗာနဲ့ မာရီယာဆိုတဲ့ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးနဲ့အသက်မွေးတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်နေထိုင်ကြပါတယ်။ တစ်ညသူတို့နေထိုင်ရာခြံကျယ်ကြီးအနီးကို အမည်မသိသက်ရှိသတ္တဝါတစ်ကောင် ချဉ်းကပ်လာခဲ့ပြီး မြင်းတွေ သိုးတွေ လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ကြပါတယ်။
ကာလတစ်ချို့အကြာမှာ မာရီယာတို့လင်မယားရဲ့သိုးအုပ်ထဲက ကိုယ်ဝန်ဆောင်သိုးတစ်ကောင်ဟာ ထူးဆန်းတဲ့ သိုးတစ်ပိုင်း လူတစ်ပိုင်းကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်မွေးဖွားလာခဲ့ပြီး မာရီယာတို့လင်မယားကလဲ သားသမီးအရင်းလိုစောင့်ရှောက်သံယောဇဉ်တွယ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
တစ်နေ့မှာတော့ အင်ဂဗာရဲ့အစ်ကို ပီတာ သူတို့ဆီကိုအလည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ အင်ဂဗာကတော့ သိုးတစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းကလေးငယ်ကို တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်လို့သာအထင်ရှိပြီးမနှစ်မြို့ပါဘူး။ သူဟာ မာရီယာ့ကိုလဲထိကပါးရိကပါးလုပ်လေ့ရှိသလို သူအိမ်ရောက်ရောက်ချင်းအချိန်မှာ မာရီယာ့ကိုအကျပ်ကိုင်နိုင်တဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုကိုလဲ သိမြင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကလေးငယ်ရဲ့ဇစ်မြစ်နောက်ကြောင်းရင်းခံက ဘာလဲ? ဘယ်လိုအဆက်အစပ်တွေနဲ့ သူတို့ဆီကိုရောက်ရှိလာခဲ့တာလဲ? သူတို့ဆီကို သူတို့မသိလိုက်ပဲ တစ်ခါတစ်လေလာတတ်တဲ့အမျိုးအမည်မသိသတ္တဝါကြီးမှာရော ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်တွေရှိမလဲ၊ စတဲ့လျှိုဝှက်ဆန်းကြယ်မှုတွေကို အဖြေရှာရှုစားရပါလိမ့်မယ်။
ဝေဖန်ရေးဆရာတွေ၊ ရုပ်ရှင်ဝါသနာအိုးတွေအကြိုက်တွေ့တတ်တဲ့၊တန်းမြင့်ကားကောင်းတွေဖန်တီးတတ်တဲ့ A24 ရဲ့ကားသစ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ အပြကို ဦးစားပေးပုံဖော်ထားတဲ့အတွက် ဇာတ်ကိုလွတ်ထွက်မသွားအောင် စိတ်ဝင်တစားအာရုံထားဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
(Iceland ရုပ်ရှင်သမိုင်းတစ်လျှောက်ဝင်ငွေအမြင့်ဆုံးကားဖြစ်သလို ၂၀၂၂ အော်စကာအတွက် ‘Best International Feature Film’ အမျိုးအစား မှာ Iceland ကိုယ်စားပြုတင်သွင်းထားတဲ့ရုပ်ရှင်လဲဖြစ်ပါတယ်)
IMDb Rating 6.5 4,055 votes
Download 720p Solid Drive 400 MB
Download 480p Solid Drive 251 MB
Download 720p ⚡Fast Drive 400 MB
Download 480p ⚡Fast Drive 251 MB
Download 720p G Drive 400 MB
Download 480p G Drive 251 MB